टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा भनेझैँ भएन र ? - Online Majdoor
टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा भनेझैँ भएन र ?
पाठक विचार विचार विशेष
नेपाली भाषामा एउटा उखान छ, टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा । अहिले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरूको सुरक्षाको लागि भनिएको विदेश भ्रमणमा जाने महिलाहरूको कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव त्यस्तै देखिएको छ । उक्त प्रस्तावअनुसार ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जाँदा वडा कार्यालय र पारिवारिक सहमति अनिवार्य चाहिन्छ । तर, यस प्रस्तावले महिलाहरूको स्वतन्त्रताको अधिकार हनन हुने भन्दै प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । दलाल म्यानपावर कम्पनीहरूले भ्रमण भिसामा महिलाहरूलाई विदेश लगेर रोजगारमा लगाउने नाममा बेचिरहेको सरकारी निकायहरूको दाबी छ । यदि त्यसरी महिला र पुरुषहरूको त्यसरी गैरकानुनीरूपमा बेचबिखन भइरहेको हो भने पीडित वा पीडित परिवारको जाहेरीको आधारमा ती म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक र सम्बद्ध कसुरदारहरूलाई अविलम्ब पक्राउ गरी जेलमा राख्नु पर्दैन र ? त्यस्ता दलालहरू लामो अवधिको लागि जेल परे आगामी दिनमा त्यस्तो अपराधमा अवश्य कमी आउनेछ । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जान खोजिरहेका महिला र पुरुष युवाहरूलाई खबरदारी गर्न सजग बनाउन जरूरी छ । यस्ता केही पनि काम नगरी महिलालाई विदेश भ्रमणमा जान रोक्ने वा जानका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस र घरपरिवारको सहमति अनिवार्य गर्नु पूर्ववत् उखान चरितार्थ गर्नु भएन र ?
पनौतीमा पार्टी प्रकाशनहरूको प्रदर्शनी
ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे कमरेड !
ख्वप अस्पतालमा एन्टिजेन परीक्षण गर्नेको भिड
१ माघ २०७८ को ‘मजदुर’ पढ्दा
कालले नेता, व्यापारी र धनी भन्दैन
एमसीसी पारित गर्ने प्रयास साझा कार्यक्रमविपरीत